काखीमा आउने पसिनाबाट कसरी मुक्ति पाउने ? | सुदुरपश्चिम खबर
काखीको छाला शरीरको अन्य स्थानको छालाभन्दा धेरै संवेदनशील हुन्छ । यो ठाउँको छालाको स्वच्छता र सुरक्षाको लागि हामीले विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । अनुहार र शरीरको बाँकी भाग जस्तै काखीको सुरक्षा र स्वच्छताबारे ध्यान दिनु र यसको हेरचाह महत्वपूर्ण हुन्छ ।
काखीको छाला हामीले हात माथि उठाउँदाबाहेक अरु समय हातले छोपिएर बसेको हुन्छ । यसको अर्थ यो हो कि यो ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा पसिना सञ्चित हुने गर्छ ।
एउटा सेतो सर्ट लगाएर निस्किएको मान्छे साँझ घर आउँदा अन्यत्र फोहोर भए पनि नभएपनि काखीमा भने फरक रंगको फोहोर पक्कै पनि देखिन्छ । कतिपयको काखीमा रौं हुन्छ, त्यसले झनै धेरै पसिना सिर्जना गरेर काखीलाई फोहोर गर्न सक्छ । कतिपयको काखीमा अनावश्यक कालो दाग लागेको देखिन्छ । यो कहिलेकाहीँ मृत छालाको कोषका कारण हुन्छ भने कहिलेकाहीँ अत्यधिक पसिनाका कारण पनि हुने गर्छ । कसैकसैमा यस्तो समस्या पुख्र्याैली समस्याको रुपमा पनि देख्न सकिन्छ । कहिलेकाहीँ त्यस्तो कालो दागले केही रोगको संकेत समेत गर्छ ।
काखीबाट आउने गन्धलाई नियन्त्रण गर्नको लागि काखीको रौ खौरिने प्रवृत्तिको विकास हुँदैछ । तर वास्तविकतामा यो एक धेरै प्रभावकारी विधि हो, यसैले पछिल्लो समय लोकप्रियता प्राप्त गर्दैछ । कतिपयले काखीबाट आउने गन्ध पसिनाबाट आउँदैन भनेर दाबी पनि गर्छन् । किनभने पसिनाको आफ्नै गन्ध हुँदैन । काखीमा आउने पसिना पहिले नै त्यहाँका ब्याक्टेरियासँग मिसिएर त्यसले नयाँ गन्धको विकास गर्छ । त्यसपछि आउने गन्ध सहन गर्न गाह्रो हुन्छ । यदि तपाईंले त्यस क्षेत्रमा रहेका ब्याक्टेरिया वा मृत कोषिका सफा गर्नुभयो भने काखीबाट आउने गन्धलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
काखीको रौंलाई खौरिएर ब्याक्टेरिया मारेपछि बिस्तारै मृत छालाका कोषहरू पनि हटाउनु पर्छ । यो उपाय दिनभर काखीबाट आउने दुर्गन्धलाई कम गर्ने र सुगन्ध दिने उत्तम तरिका हो । यसले ब्याक्टेरियालाई मात्र शुद्ध पार्दैन छालाको स्तर बढाउने काममा पनि भूमिका खेल्छ । जसले अधिक पसिना नियन्त्रण गर्न र ताजापन बढाउन पनि भूमिका खेल्छ ।
यदि तपाईंले काखीको रौं खौरिनुभयो भने जसमा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड वा बिटा हाइड्रोक्सी एसिड जस्ता सक्रिय तत्वहरू पाइन्छ । यसले हाम्रो काखीको समस्याबाट छुटकारा पाउन मद्धत गर्छ । यसले काखीमा देखिने कालो दागलाई कम गर्न पनि मद्धत गर्छ । (अनलाइनखबर बाट सभार)
हरेक राति सुत्नुअघि एक गिलास तातोपानी र ल्वाङ !!
हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !! आज शनिबार चम्किदैछ यी ८ राशिको भाग्य, तपाईको कुन ?